Booliska Kenya oo xadka ay la wadaagaan dalka Uganda ku xiray ku dhawaad 10 qof oo Soomaali ah. – Radio Daljir
Maajo 12, 2013 7:29 b 0
Kenya,12? May 2013 Ciidamada Booliska Kenya ee ilaaliya xuduuda u dhaxeysa wadamada Uganda iyo Kenya ayaa ???ayaa ??Gacanta ku dhigay sagaal qof oo Soomaali ah kuwaasoo ay Booliisku shaaciyeen in mudo sadex Maalmood ah ay ku xirnaayeen xuduuda ay wadaagaan labadaasi wadan.
Ciidamada Booliska ayaa sheegay in dadkani ?isugu jireen caruur ?iyo haween iyagoo qorsheynayay Inay ka gudbaan xuduuda u dhaxeysa 2 da dal kadib markii ay lacago?? muqalas ah ka qaateen dulaaliin doonayey inay dhinaca dhulka si sharaci daro ah uga ?geliyaan dalka Kenya.
Dadkan ayaa sidoo kale la sheegay in maanta ?ay boolisku saareen maxkamad kutaala dhinaca Xadka iyadoo ku xukuntay min sadex kun oo doolarka Mareykanka ah kadib markii lagu eedeeyay inay si Sharci daro ah kusoo galayeen wadanka Kenya.
Xuduudka u dhexeeya wadanka Kenya iyo Uganda ayaa inta badan waxaa ay? dadka Soomaalida ah ee doonaya in ay si dhuumaaliaysi ah ku galaan wadanka Kenya waxaa ?kala kulmaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin xarig iyo in laga qaado lacago ganaac ah.Kenya,12? May 2013 Ciidamada Booliska Kenya ee ilaaliya xuduuda u dhaxeysa wadamada Uganda iyo Kenya ayaa ???ayaa ??Gacanta ku dhigay sagaal qof oo Soomaali ah kuwaasoo ay Booliisku shaaciyeen in mudo sadex Maalmood ah ay ku xirnaayeen xuduuda ay wadaagaan labadaasi wadan.
Xuduudka u dhexeeya wadanka Kenya iyo Uganda ayaa inta badan waxaa ay? dadka Soomaalida ah ee doonaya in ay si dhuumaaliaysi ah ku galaan wadanka Kenya waxaa ?kala kulmaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin xarig iyo in laga qaado lacago ganaac ah.